အသက် ၄၀အရွယ်တဲ့ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » အသက် ၄၀အရွယ်တဲ့	16
Posted by snow white on Jul 21, 2012 in Copy/Paste | 16 comments
(စေတနာနဲ့ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ သိပြီးတဲ့သူလည်းရှိသလိုမသိသေးတဲ့သူလည်းရှိမယ်ထင်လို့ ဒီပို့စ်လေးတင်ပေးလိုက်တာပါ ။။။)
မောင်ပေ says: စနိုးလေးကို ကိုပေ သေချာလိမ်းပေးပါမယ်ကွယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4592
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဟေ့လူဂျီး …
မဒမ်ပေနဲ့ တိုင်ကြောလိုက်မှာနော် ..
စနိုးလေး အဲ့ဒီ နဖူးပြောင်ပြောင်နဲ့ ဘူးဂျီးချကားကို ယုံနဲ့နော် ..
အနော့်စကားကိုပဲ ယုံ .. သိလား .. ဟီဟိ .. :D
shwe kyi says: အလှပြင်ပစ္စည်းတွေလည်းများလှပါတယ်ရှုပ်နေတော့တာပါပဲ စနိုးရယ်။ နားမလည်တာနဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးကလွဲရင်ဘာမှကိုမသုံးဖြစ်။
ဖုန်းလည်းလိုင်းတွေများလွန်းလို့နားမလည်တာနဲ့ မသုံးဖြစ် (ဟဲ ဟဲ မ၀ယ်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 37
ma haw says: မျက်နှာလိုက်တယ်…သားတို့လိုကောင်ထီးတွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလဲလို့…:P
mayjuly says: အယ် ..အဲ လောက် အများကြီးးဝယ်လိမ်းနိုင်ပါဘူးတော် ….
နဂိုရှိမှ နဂိုင်းထွက်တာပါအေ ….. :D :P
Foreign Resident says: အမှန်တော့ အရှည်ကြီး ဖြစ်နေလို့ပါ ။ လိုရင်းက ။
၁ ။ မျက်နှာစင်အောင် Facial Cleanser / Transparent soap နှင့်ဆေးပါ ။
အဓိက က မျက်နှာပေါ်မှာ ဆပ်ပြာရဲ့ Residue မကျန်စေတဲ့ ဆပ်ပြာ အကောင်းစား သုံးပါ ။
Transparent soap ကို Recommend ပေးပါတယ် ။ ဈေးကြီးပြီး ၊ ရှားပါတယ် ။
၂ ။ သိပ် စင်ကြယ် သွားတဲ့ အတွက် ချွေးပေါက်တွေပါ ပွင့်သွားပြီ ။
Toner လူးချင်းက ချွေးပေါက်တွေ ကိုပြန်ကျဉ်းပေးတယ် ၊ ထပ်ပြီးလည်း သန့်စေတယ် ။
၃ ။ Facial Cleanser / Transparent soap နှင့် Toner သုံးပြီး ရှင်းလိုက်ရင် ၊
မျက်နှာပေါ်မှာ အဆီမှန်သမျှ ပြောင်သွား ၊ ခြောက်သွားပြီ ။
အဆီ မရှိရင် wrinkle ဖြစ်မယ် ၊ အိုမယ် ၊ အသားအရေပျက်မယ် ။
ဒါကြောင့် Moisturizer လူးပြီး ရေ + ဆီ ပြန်ဖြည့်တယ် ။
အဲဒီ ၃ ဆင့်ပြီးရင် အမှန်က အခြေခံ အားဖြင့် လုံလောက်သွားပြီ ။ ဒါပေမယ့် ။
၄ ။ နေ့အခါမှာ နေရောင် နှင့်တွေ့မှာမို့ အပေါ်က Sun Screen / Block ထပ်အုပ်မယ် ။
SPF ၂၅ နှင့်အထက် ။ Heavy Metal ( Eg, Titanium ) မပါတာ ရွေးဝယ်ပါ ။
၅ ။ ညမှာ အသားအရေကို ပြန်အားဖြည့်ရအောင် Replenishment Night Cream သုံးမယ် ။
၆ ။ တကယ်လို့ မျက်နှာ အသားအရေ ထူနေရင် မွှေးညင်းပေါက် လမ်းရှည်ပြီး ၊
အဲဒီလမ်းမှာ အဆီပိတ်ပြီး ဝက်ခြံဖြစ်ပြီး ရောင်ရမ်းနိုင်လို့ ၊
Alpha Hydroxy Acid ( အက်စစ် အပျော့စား ) လူးပေးဖို့ လိုလိမ့်မယ် ။
Foreign Resident says: အဘ ရန်ကုန်မှာ Transparent soap ရှာဝယ်ဘူးပါတယ် ။
မွှေး ဆပ်ပြာတုန်း တစ်ဝက်ပဲရှိတဲ့ အရွယ်ကို ၊
၈၀၀၀ ကျပ် ပေးရပါတယ် ။
ညလေး says: အဘရယ်…..ရှင်းပြပေးလို.ကျေးဇူးပါနော်…..
နေ၀န်းနီ says: အင်း…… သူလည်း MRTV ကို အားကျတယ်ထင်ပါ့…..။ ကြော်ညာ သွားလိုက်တဲ့ ပစ္စည်း အမယ်တွေ များလိုက်တာ……….။ ကျော်ညာ ခ ဘယ်လောက်ရသလဲ ဟင်………. :P :P :P
ဘဲရှုပ် says: အတက် ၄၀ ပြောသမို့ နာတို့ အတွက်များလားလို့
ဟွင့် ဟုတ်လဲ ဟုတ်ဖူး
ကြောင်ကြီး says: အမေ အသက်လေးဆယ်မှာ ကျုပ်ကောင်းကောင်းဂျီး သိတတ်နေပီ ဒီတော့ အသက်လေးဆယ်အရွယ် အပျိုဂျီး၊ အာပြိုဂျီး အားလုံးကို ဤနေရာမှ ကန်တော့ပါသည်။ :eek:
ဇောက် ထိုး says: ၀တ်စားလိုက်တာ ကော့လို့ …ပျံလို့….. ရာကျော်တန် ထီးနဲ့ဖိနပ်….လက်သဲနီက ရောင်စုံမက….
ဆံပင်ကောက်လို့ အလှပြုပြင်ပြန်တယ်….. ဈေးကြီးလိုက်တာနော်……နောက်ဆုံးပေါ် သူတို့တ၀တ်စာ….
လခထုတ်ရင် မျက်ခုံးလှုပ်လို့နေ… ရွှေတိဂုံရှင်တော်ဘုရား….တပည့်တော်အားကယ်တော်မူပါ… ဥုံဟရီ ဟရိ ၈ါထာသရဇယ် အသုံးအဖြုံးကြီးတဲ့ စာရေးမနဲ့လွဲရပါစေ….လွဲရပါစေ…
ahnyartamar says: အသက် ၄၀အရွယ်၊ ကိုကို ကာလသားတွေ အတွက်ကျ မပါဘူး၊ မတရားဘူး။
Wow says: အသားအရေထိမ်းတာလဲ ထိမ်းတာပေါ့ အဓိကက ကံ၊စိတ်၊ဥတု၊အာဟာရတဲ့ ဒီလေးမျိုးမျှအောင်နေ ဘာ ကော့စမစ်တစ်မှမလို….
ဟီး…ဟီး.. မတူတဲ့ အမြင်နဲ့မန့်ကြည့်ဒါ… :D
Mr.Know-All says: mahaw နဲ့ ahnyartamar တို့ရေ
မပူပါနဲ့ဂျာ Mr.Know-All က ခင်ဗျားတို့ အတွက်အထူးသီးသန့် ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်
အရင်ဆုံးမျက်နှာကို ချေးစင်အောင် ကော်ပတ်စားပေးပါတယ်
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ မျက်နှာလေး ဖြူစင်ဝင်းပလာအောင် ဖူဂျီနဲ့လျှော် အဲလေ ဆေးပေးပါတယ်
နောက် ချွေးပေါက်လေးတွေကျယ်လာမှာစိုးလို့ အိုင်အိုဒင်းဆားနဲ့ Spa ၀န်ဆောင်မှုပေးပါတယ်
စတုတ္ထအဆင့် အနေနဲ့ကတော့ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုမှ ကာကွယ်ဖို့ အက်စစ်နည်းနည်း (အဆီပိတ်ပြီး ၀က်ခြံဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ ဟီး)ကို အဆုံးသတ် Revelon မြေဖြူမှုန့် မရိုက်ခင်မှာ တို့ပေးပါတယ်
ကဲ ကိုကိုတို့ ဦးကြီးတို့ အတွက် သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ Mr.Know-All ရဲ့ ညင်ညင်သာသာ ဘူးသီးဇလုံက ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ………
( ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ အမှတ်တရ မာဆတ် အထူးခန်းမှာ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဆင်တစ်ကောင်နှုန်းဖြင့် အထူး ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေပါပြီ)
south thal says: သားသားအသက်က ခုမှ ၅၃ဆိုတော့ သူပြောတာ က အသက်၄၀ အရွယ်ဆိုတော့ သားသားတို့အတွက်မပါဘူး။။။